ယခုအချိန်မှစပြီး ခရီးစဉ်ရဲ့ တည်နေရာတွေကို ပြန်လည်တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ.. | Grab MM
ယခုအချိန်မှစပြီး ခရီးစဉ်ရဲ့ တည်နေရာတွေကို ပြန်လည်တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ..
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ အဓိက တောင်းဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ ယာဉ်မောင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်များလုံခြုံမူ့ကို အထောက်အကူပြုပေးမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော “တည်နေရာဖော်ပြခြင်း” လုပ်ဆောင်ချက်ကို Grab မှ ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ ရှင်းပြရရင်တော့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ခရီးစဉ်တစ်ခုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ “Pick-up” တည်နေရာသာမက ခရီးသည်သွားလိုတဲ့ ခရီးစဉ်ရဲ့ “Drop-off” တည်နေရာကိုပါ တပါတည်း တွေ့မြင်ရနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Auto Accept နဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာ Drop Off ခရီးစဉ်တည်နေရာကိုကြည့်ရှုလိုတဲ့အခါ မျက်နှာပြင်ညာဖက်အပေါ်ထောင့်နားက Drop off ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Drop-off တည်နေရာကို တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
“တည်နေရာဖော်ပြခြင်း” လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
‘တည်နေရာဖော်ပြခြင်း’ ရရှိတဲ့ရက်သတ္တပတ်ကစပြီး မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အပတ်စဉ် Incentive တွေရယူနိုင်ဖို့ “Auto Accept” လုပ်ဆောင်ချက်ကို အစဉ်ဖွင့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Auto Accept မဟုတ်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေကို အပတ်စဉ် Incentive အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းရေတွက်မှာမဟုတ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Completion Rate (ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးမှုနှုန်း) – 65% နဲ့အထက် အပတ်စဉ်တိုင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Completion Rate ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ရရှိတဲ့ ခရီးစဉ်အားလုံးအတွင်းတွင် ခရီးသည်၊ ယာဉ်မောင်း၊ Operator သုံးခုစလုံးရဲ့ Cancel ပြုလုပ်ခြင်းများမပါဝင်တဲ့ အသားတင် ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးမှု ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Completion Rate ကိုအပတ်စဉ်တိုင်း တနင်္လာနေ့မနက် ၁၂နာရီမှ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၁:၅၉ အချိန်အထိ တွက်ချက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Completion Rate ကို မိတ်ဆွေရဲ့ Home Screen မှာ၊ ယာဉ်မောင်း Rating နဲ့အတူ ယှဉ်တွဲ ပြသနေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မိမိရဲ့ ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်းကို အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ယခင်က ရှိခဲ့တဲ့ Acceptance Rate (လက်ခံနှုန်း) နဲ့ Cancellation Rate (ပယ်ဖျက်နှုန်း) တွေကိုတော့ ‘Incentive’ Tab ထဲမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက်များကို ပထမတစ်ပတ်တွင် မပြည့်မီပါက ဒုတိယတစ်ပတ်တွင် “Drop off” တည်နေရာများ မြင်တွေ့ရသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ပတ်ပိတ်ထားမယ့်အပြင်၊ စာပို့ပြီး အသိပေးအကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ချက်များကို ပထမတစ်ပတ် + ဒုတိယတစ်ပတ်တွင် မပြည့်မီပါက တတိယတစ်ပတ်တွင် ထပ်မံ၍တစ်ပတ်ပိတ်ထားခြင်း၊အသိပေးအကြောင်းကြား စာပို့ခြင်း အပြင် ဖုန်းဆက်အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းများပါ ပြ ုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
သတ်မှတ်ချက်များကို ပထမတစ်ပတ် + ဒုတိယတစ်ပတ် + တတိယတစ်ပတ်တွင် ထပ်မံမပြည့်မီပါက မိတ်ဆွေရဲ့ “Drop-off” တည်နေရာဖော်ပြခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်လပိတ်သိမ်းမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အသိပေးအကြောင်းကြားစာလည်း ပေးပို့ပေးသွားမှာပါ ။
တစ်လပိတ်သိမ်းခံရပြီဆိုလျင်တော့ မိတ်ဆွေအနေနှင့် Grab ရုံးကိုလာရောက်၍ သတ်မှတ်ထားသော ဖောင်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာပါ ။
သတ်မှတ်ဖောင်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် တစ်လအတွင်းတွင် ထပ်မံ၍ မပြည့်မီသောအနေအထားဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးလပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
မေး – ကိုယ်တိုင်လက်ခံတဲ့ ဘွတ်ကင်တွေမှာ Pick-up နဲ့ Drop-off တည်နေရာတွေကို တွဲမြင်ရတယ်၊ Auto Accept ဘွတ်ကင်တွေမှာ Drop-off ပွိုင့်ကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ?
ဖြေ – Auto Accept နဲ့ ခရီးစဉ်လက်ခံပြီး ခရီးစဉ်တည်နေရာကိုကြည့်ရှုလိုတဲ့အခါ မျက်နှာပြင်ညာဖက်အပေါ်ထောင့်နားက Drop off ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Drop-off တည်နေရာကို တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
မေး – “တည်နေရာဖော်ပြခြင်း” အတွက် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ချက်တွေရှိလဲ?
ဖြေ – မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Completion Rate (ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးမှုနှုန်း) – 65% နဲ့အထက် အပတ်စဉ်တိုင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မေး – ကျွန်တော့်ရဲ့ “Drop-off” တည်နေရာတွေ ဒီအပတ်မှာ မမြင်ရတော့ဘူး? ဘာလုပ်ရမလဲ?
ဖြေ – “တည်နေရာဖော်ပြခြင်း” အတွက် သတ်မှတ်ချက်တွေကို ယခင်အပတ်မှာ မပြည့်မီခဲ့လို့ပါ။ ဒီအပတ်အတွင်း ပြည့်မီမယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ “Drop-off” တည်နေရာတွေကို နောက်အပတ်မှာ ပြန်လည်တွေ့မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – တစ်လဆက်တိုက် ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်တွေ မပြည့်မီရင် “Drop-off” တည်နေရာတွေ မြင်နိုင်ဦးမှာလား ?
ဖြေ – တစ်လဆက်တိုက် သတ်မှတ်ချက်တွေကို မပြည့်မီရင်တော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ “Drop-off” တည်နေရာဖော်ပြခြင်း ကိုရနိုင်ဖို့ Grab ရုံးကိုလာရောက်ပြီး သတ်မှတ်ဖောင်မှာ လက်မှတ်ထိုးရမှာပါ။
မေး – ကျွန်တော် “Drop-off” နေရာတွေ မမြင်ရတာ တော်တော်ကြာပြီ၊ အခု သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြည့်လည်း ပြန်မမြင်ရဘူး?
ဖြေ – တစ်လဆက်တိုက် မပြည့်မီခဲ့လို့ ပိတ်သွားတာပါ။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Grab ရုံးကိုလာရောက်ပြီး၊ ဖောင်ပြန်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလုပ်ဆောင်ချက်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ Driver App မှာ ပြန်လည် ရရှိနိုင်မှာပါ။
မေး – App ပိတ်ထားရင်ရော “Drop-off” တည်နေရာဖော်ပြခြင်း က အမြဲပိတ်သွားမှာလား?
ဖြေ – မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ မပြည့်မီမှသာ “Drop-off” တည်နေရာတွေကို မမြင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် App ပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မိတ်ဆွေယာဉ်မောင်းအားလုံးကို လုံခြုံမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်မယ့် “တည်နေရာဖော်ပြခြင်း” လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ မိတ်ဆွေယာဉ်မောင်းတိုင်း ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Grab ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ လုံခြုံမှုအရှိဆုံး ခရီးစဉ်တွေကို စတင်လိုက်ရအောင်။